Dagaalada Star ee dadka qaangaarka ah, 10 comics ee Ruushka
Anime loogu talagalay dagaallo waaweyn oo loogu talagalay dadka waaweyn. Xaalad xiiso leh ayaa ka muuqata xannibaadda ay halyeeyadu ku qariyeen danaha galmada. Naqshadayaasha San Francisco waxay ka shaqeeyeen mashruuca iyagoo fikrado abuuraya iyo caymiska shakhsi ahaaneed, iyagoo sawiradaas ku muujinaya sawir jinsi ah oo ku saleysan anime loo sameeyey. Xogta ayaa muujisay in 44% taageerayaasha goobta ay yihiin kuwa isticmaala baaluqa, waxay jecel yihiin in ay internetka eegaan wakhti madhan oo maalinta ah, si ay u nastaan ​​maanka.
Ugu weyn > 18 + > Dagaalka Star ee dadka waaweyn
La soco dagaallada xiddigaha ee dadka waaweyn ee ku jira moobaylka